Shaqo abuur hal abuurka Ali Uysal | Abuurista khadka tooska ah
Dharka weyn ee dharka sida farshaxan by Mehmet Ali Uysal
Fikradda ku jirta farshaxanka muhiim ayey u tahay awood u yeesho inaad cadeyso hadhow qiimaha farsamada lagu fulinayo iyo inaad awood u yeelato inaad muujiso oo keliya in daraasaddu ay qaadanayso sannado, laakiin sidoo kale inaad rabto inaad ku muujiso farriin adigoo adeegsanaya farshaxan farshaxan. Fikradda uu adeegsaday Mehmet Ali Uysal waxay marka hore muujineysaa farriinta la muujinayo ka dibna waxay ku shaqeysaa iyadoo la adeegsanayo qalab kala duwan si loo sameeyo dharka weyn.
Jidka taas qanjaruufo jeexjeexa dhaantadan weyn waa wax mudan in la sheego iyo in si qumman qaar ay u maleynayaan inaan ka hor ahaan jirnay muuqaal dib loo soo celiyay, laakiin maya, waa farshaxan ku yaal Belgium waana la booqan karaa. Dariiq ka wanaagsan oo lagu soo jiito indhaha dadka deegaanka ayaa ah in lagu xardho sawirada foosha xun ee foosha xun ee wadooyin badan oo wareega ah tobaneeyo magaalo oo dalka ka mid ah si fiican ayaan u naqaan.
Farshaxankan waxaad joogtaa Beljamka cidda aad xiiseyneyso, oo xitaa laga arki karaa Google Streetview. Websaydhka farshaxanka waxa kale oo aad ka heli kartaa sawirro kala duwan oo ku saabsan hannaanka aan u qaadayo abuurista sawirkan xiisaha leh ee asalka ah ee aan cidna uga tagaynin danayn marka aad ag marayso.
Malaha halkan ha soo galin geedi socod aan caadi ahayn oo loogu talagalay abuurista baaxadda weyn dharka, laakiin fikradda iyo fikradda ayaa ah halka asalka iyo barta hal-abuurka ay inta badan ka qaataan.
Xiiso leh soo-jeedin hal abuur ah oo uu soo saaray Mehmet Ali Uysal inaad isaga raaci karto degel u gaar ah si loogu dhawaado shaqooyin badan oo farshaxan ah oo isaga ka dhigaya farshaxanle uu raaco taasna waxay muujineysaa asalka iyo hal-abuurnimada ay fikradihiisu qaaliga ku yihiin.
Oo hadaad jeceshahay qaabkan sawirada, waxaa jira mid kale oo ah clip oo aad u xiiso badan New Orleans gudaha Mareykanka sida aad ku arki karto sawirkii hore.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Dharka weyn ee dharka sida farshaxan by Mehmet Ali Uysal
Saamaynta 'Janjeeri Janjeer' ayaa lagu dabaqay sawirada Van Gogh
Abuur qolal kale oo kuu gaar ah oo loo yaqaan 'Adobe Creative Suite' oo wata softiweer bilaash ah